Ugo Naijiria Awuchie na Brazil
Previous Article Guinea Emerie Ugo Ọlaedo
Next Article Naijiria Emerie Tanzania na Mgbá Dike
Onye na-agba n'ihu bụ Olakunle Olusegun kpara ike dịka dike oge otu egwu bọọlụ ala anyị na-erubeghị afọ iri na asaa nọrọ n'ụbọchị Wednezdee bụrụ mba mbụ ga-esi Afrịka were sonye Asọmpi Iko FIFA maka ndị na-erubeghị afọ iri na asaa nke afọ a.
Nke a bụ dịka ha jiri nanị otu ọkpụ were merie mba Angola na Iko Afrịka ndị na-erubeghị afọ iri na asaa, n'afọ puku abụọ na iri na iteghete nke were ọnọdụ n'amaegwuregwu Dae es Salaam, dị na Tanzania.
Mmeri a mere na Ugo Ọlaedo Naijiria ga-esonye na Iko Mba Ụwa FIFA nke afọ a dịka mmiri richara ha, mere ha ejighị soro na-agba nke gara aga egbara n'afọ abụọ gara aga na India.
Mba Naijiria jiri ọkpụ ise asatara nanị anọ merie Tanzania ụbọchị Sọndee.
Ụnyaahụ, Olusegun were otu goolu o nyere site na penariti na nkeji iri abụọ na otu, nke bụ nanị goolu enyere na asọmpi ahụ, were tunye ndị Naịjirịa ugo; bụ ndị rurula na agba nke na-eso agba ikpeazụ ma asọmpi ahụ. Olusegun gbanyere goolu ahụ ebe o mere oche goolu Geovani Raimundo taa kpuchie ọnụ.
Ugo Ọlaedo Naijiria bụ ndị nọ na-akụziri ndị Angola egwu site mgbe nkeji mbụ asọmpi ahụ bidoro mana ha enweghị ike inye goolu. N'agbanyeghị bọọlụ nke Wisdom Ubani gbafuru bọọlụ na nkeji iri na otu na iri na asatọ, na nke oche goolu Sunday Stephen, bụ onye nọchiri Suleman Shaibu, chere site n'aka Zito Luvumbo na nkeji iri na atọ, Olusegun mere ka ihu ọchị pụta ndị Naịjirịa n'iru oge onye Angola na-agba n'azụ metụchara bọọlụ n'aka.
Dịka ebidochara ọkara nke abụọ na nkeji nke isii ya, Angola fọdụrụ mmadụ iri ka Jose Cabincano nwetachara akwụkwọ edo edo nke abụọ mere o jiri bụrụ akwụkwọ ọbara ọbara mana ndị Naịjirịa enweghị ike iwere ohere ahụ mepụta ihe dịka ha na-agbafusi bọọlụ n'ọnụ goolu ndị Angola.
N'asọmpi nke ọzọ, Uganda gwara Tanzania na ha karịrị ha site n'iji ọkpụ atọ asataghị ihe ọ bụla were dulaa ha mmụọ n'atụghị egwu na ọ bụ na be ha ka a nọ were asọ ya bụ mpi. Nkea meziri Uganda jiri bụrụ ndị nke abụọ n'otu A ebe Angola na Tanzania bụ ndị nke atọ na anọ.
N'ụbọchị Satọdee, Ugo Ọlaedo bụ ndị nọ n'isi otu A, na mba Uganda ga-achipụ ya na Amaegwuregwu Chamazi na Mbagala, otu oge ahụ Tanzania na Angola ga-agwọ onwe ya abacha.